Wargeys Caalami Ah Oo Qoray Qorshe Maraykanku Ku Dhisanayo Jid Isku Xidhi Doona Muqdisho Iyo Jabuuti Iyo Goobaha Uu Mari Doono | Hangool News
Wargeys Caalami Ah Oo Qoray Qorshe Maraykanku Ku Dhisanayo Jid Isku Xidhi Doona Muqdisho Iyo Jabuuti Iyo Goobaha Uu Mari Doono
January 28, 2019 - Written by Hangool News 1
Wargeyska Caanka ah ee Foriegn Policy ayaa daabacay warbixin layaab leh oo uu ka diyaariyay qorshe Maraykanku ku damacsan yahay in uu ku dhisto Jid dheer oo isku xidhi doona Saldhggiisa Milatari ee uu ku leeyahay Magaalada Jabuuti iyo Saldhigga Balli Doogle ee Duleedka Magaalada Muqdisho oo uu ku leeyahay xarun gara ah oo dhinaca Milatariga ah taasi oo aan la ogayn muddoda ay qaadan doonto iyo sida mashruucaasi u dhaqan gali doono.
Wasaaradda Gaashaan-dhigga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday mashruuca dhismaha waddo dhulka ah oo isku xidha Saldhigga ugu weyn Maraykanka ee Afrika ee dalka Jabuuti iyo Garoonka ciidanka Cirka Soomaaliya ee Balli-doogle oo ku yaalla Gobolka Shabeellaha hoose ee dalkaasi Soomaaliya.
Waddadan ayaa waxaa ay dhexmari doontaa sida wargeyskani sheegay dhulka Ismaamulka Soomaalida ee ay Itoobiya Maamusho, waxaana uu Mareykanku ugu talagalay in ay adeegsadaan Ciidankiisa ku sugan labadaasi saldhig oo uu ka dhigi doono mid weyn oo awood ahaan iyo shaqo ahaanba awood badan si uu gacanta ugu hayo danihiisa Geeska Afrika.
Mashruuca dhismaha Waddadan ayuu wargeysku ku sheegay in ay qaadatay sharikad laga leeyahay Maraykanka oo fadhigeedu yahay Gobolka Virginia, taas oo lagu magacaabo Pacific Architects.
Waddadan waxaa ay dhexmareysaa dhul khatar dhinaca amaanka ah oo meelaha qaar waxaa maamula Al-shabaab, waxaa kale oo ay mari doontaa dhul ay ka taliyaan malleeshiyo beeleed iyo Sohdin aan wali heshiis rasmi ah laga gaadhin oo u dhaxeysa Itoobiya iyo Soomaaliya.
Waxaa ay Waaxda Difaaca Mareykanka ee qorshahan waddaa sheegtay in waddadan qeybta Soomaaliya dhexdeeda ah ay ku ka ceyso $75Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Garoonka Balli-Doogle oo ku dhawaad 90 KM u jira Muqdisho ayey Ciidamada Mareykanka ah ee jooga waxaa ay sahayda u martaa dhinaca cirka waxaana u geeya diyaarado Helicopterro ah oo ka duula Garoonka Adan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Wargeyska Foriegn Policy oo maqaalkan daabacay ayaa sheegay in khubarro uu wareystay u sheegeen in u jeeddada Mareykanku ka leeyahay Waddadan ay tahay sidii uu u dhimi lahaa baahidda Awoodda dalka Shiinaha ee Geeska Afrika isna uu isugu sii ballaadhin lahaa.
Shirkadda Pacific Architects, waxaa ay hore u heysatay mashruuca dhismaha saldhigyada Mareykanka ee Soomaaliya,waxaana bishii January ay sharikad iyada hoos tagtaa mashruuc ka hir gelisay Muqdisho taas oo lagu magacaabo Africa Expeditionary Services.
Africa Expeditionary Services, ayaa dhismahan ka shaqeyn doonta iyada oo shaqaaleysiineysa sharikado kale oo gudaha ah inkasta oo hal sharikad oo aan mgaceeda la sheegin ay diidday mashruucan.